Fiomanana amin'ny fetin'ny paska :: Hitety tokantrano ireo mpitondra fivavahana mandritra ny Herinandro masina • AoRaha
Hanomboka amin’ny alahady 5 avrily ho avy izao ny Herinandro masina, fiomanana amin’ny fetin’ny Paska. Noho ny fisorohana amin’ny fiparitahan’ny tsimok’aretina « Coronavirus » no nandraisan’ny Fiombonamben’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara (FFKM) fanapahan-kevitra fa tsy hisy ny fanompoam-pivavahana hiarahan’ny mpino any am-piangonana amin’ity herinandro masina indray mitoraka ity.
Ny mpitondra fivavahana no hiezaka hitety tokantrano, araka ny fanazavan’ny pasitera Rakotonirina David, filohan’ny FFKM sady filohan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM), omaly.
« Miandry ny zavatra hitranga eto amin’ny firenena sy ny fanapahan-kevitra horaisin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, ny momba ny fetin’ny Paska », hoy izy. Manentana an’ireo mpino rehetra tsy ankanavaka manerana ny Nosy ity filohan’ny FFKM ity mba ho tony sy hanaja ny fepetra fihibohana ary ny fitandroana mandrakariva ny fahadiovana.
« Ekeo ny fepetra rehetra navoaka. Manaova madio, manasa tanana matetika. Rehefa voahaja ireo dia ho hitanareo fa ho resintsika io areti-mandoza maneran-tany io. Samia mivavaka. Manàna finoana sy mivelona amin’ny fanantenana isika. Tsy ny aretina sy ny fahafatesana no tompon’ny teny farany fa manana ny fahefana hanasitrana ny olony i Jesoa Kristy. Mihiboha aloha any an-trano fa rehefa afaka ny aretina misokatra malalaka ho anareo foana ny varavaran’ny fiangonana », hoy hatrany izy.